Ifulethi kufuphi neBangkok Don Mueang Airport (emhlophe) - I-Airbnb
Ifulethi kufuphi neBangkok Don Mueang Airport (emhlophe)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRoland
Indlu entsha (i-21 sqm studio) kufuphi ne-Don Muang Airport kunye ne-Future Park Mall. Ukuzola, okuluncedo kunye nokuntsonkothileyo kwale mihla kunye nedama lokuqubha kunye nokomelela (umrhumo: 30 baht), indawo yokudlala kunye neendawo zokutyela ezikufutshane. I-Balcony, i-A/C, ifriji, iTV njl njl. I-Wifi ikwafumaneka nge-300 yeBaht ngenyanga. Imirhumo yombane ixhomekeke ekusebenziseni (malunga ne-500 ukuya kwi-800 Baht).
Ibali eli-8 eliyinkimbinkimbi (eyakhiwe ngo-2015) kunye namagumbi amancinci amancinci. Igumbi lisisitudiyo esinempahla yomoya, indawo yekhitshi (ikhitshi), ibhedi (ubukhulu bokumkanikazi), ibhedi yesofa, idesika yokusebenza, iTV eneDVD player, ikhabhathi kunye newodrophu. Ikhitshi lixhotyiswe nge-microwave, iketile yamanzi, ipleyiti yokupheka, ifriji, isinki. Iilitha ezi-2 zamanzi okusela zisimahla. Indlu yangasese inezifudumezi zamanzi ashushu. Indlu inebalcony encinci (yokutshaya). Umatshini wokuhlamba woluntu kunye ne-dipenser yamanzi ziyafumaneka (intlawulo eyongezelelweyo). Iphuli kawonke-wonke kunye nejim zikwakwi-complex (umrhumo owongezelelweyo 30 baht)
Izindlu ezintle nezizolileyo. Ukufikelela kwindlela enkulu ngebhayisikili, i-shuttle okanye ukuhamba (5 min.). Iindawo ezininzi zokutyela kunye neevenkile ezikufutshane. Iteksi ifumaneka kwindlela enkulu.
Ndihlala kufutshane neflethi kwaye unganditsalela umnxeba nangaliphi na ixesha. Ndiza kukuncedisa.
Iilwimi: English, Deutsch, ภาษาไทย